Social – Page5– Wun Yan
ဘုန်းကြီးကျောင်း အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြေသန့်ရှင်းလင်းရာမှ ငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀) ပြားအား တူးဖော်ရရှိ
ဘုန်းကြီးကျောင်း အသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြေသန့်ရှင်းလင်းရာမှ ငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀) ပြားအား တူးဖော်ရရှိ ၁၁. ၂. ၂၀ ၂၀ ရက်နေ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ကုန်းကျေးရွာ၌ နံနက် (၈)နာရီခန့်တွင် သုဓမ္မာသာရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရွာသူရွာသားများမှ မြေနေရာသန့်ရှင်ရေး ဆောင်ရွက်နေစဉ် အင်ကုန်းကျေးရွာနေ ဦးမင်းစိုးလင်း(ဘ)ဦးထွန်းရွှေ မှ GEORGE V KING &…
ဈေးရောင်းလို့ရတဲ့ ငွေလေးနဲ့ ဆေးရုံကို လစဉ် အောက်ဆီဂျင်၀ယ်ဖို့ မပျက်မကွက် လှူပေးနေတဲ့ အမေအိုကြီး
ဒီအဒေါ်ကြီး နာမည်က ဒေါ်အေးရီ၊ မဲဇလီ ကျေးရွာ ထဲကပါပဲ။ အမျိုးသားက ဆုံးသွားတာ ကြာပြီ။ သားတစ်ယောက်က စစ်သား ကျဆုံး ပင်စင်လခ လေးရတယ်။ စနေစျေးမှာ ရေအိုးတွေရောင်းတယ်။ ညနေဘက် အကြော် ရေမုန့်ရောင်းတယ်။ ကုန်စုံဆိုင် သေးသေးလေး ရောင်းတယ်။ သူက မဲဇလီဆေးရုံ ကို လစဉ် oxygen ဝယ်ဖို့ ငွေ ၃၃၀၀၀ လှုတယ်။ ၁၀…
အသုဘလာမေးတဲ့ အမျိုးသမီးကို ပူးကပ်ပြီး ဖခင်ကို အပြောချင်ဆုံးစကားလေးတစ်ခွန်းကို ပြောသွားခဲ့တဲ့ မီးရှို့သတ်ခံရသူ မလွင်မာဦး
အသုဘလာမေးတဲ့ အမျိုးသမီးကို ပူးကပ်ပြီး ဖခင်ကို အပြောချင်ဆုံးစကားလေးတစ်ခွန်းကို ပြောသွားခဲ့တဲ့ မီးရှို့သတ်ခံရသူ မလွင်မာဦး ခင်ပွန်းဟောင်းရဲ့ မီးရှို့ ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ညီမလေး မလွင်မာဦး ဆုံးပါးသွားခဲ့တာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီး သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ ညီမလေးလွင်မာဦးကို မီးရှို့ခံခဲ့ရတာကြောင့် မီးရှို့ သဂြိုလ်တာမျိူးမလုပ်ဘဲ အုတ်ဂူသွင်း သဂြိုလ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ် မလွင်မာဦးမီးရှို့ခံရကာ ဆေးရုံတက်နေကတည်းက လိုက်ပါကူညီပေးနေတဲ့ မနန်းတင်မိုးသူ ကတော့ သူမဆုံးပါးပြီးနောက် အသုဘလာမေးတဲ့ အမျိူးသမီးကို ပူးကပ်ကာ…
ရွှေမန်းသူ Express ယာဉ်ပေါ်တွင် ကိုယ်၀န် (၇) လ လွယ်ထားရသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကလေးမီးဖွား
ရွှေမန်းသူ Express ယာဉ်ပေါ်တွင် ကိုယ်၀န် (၇) လ လွယ်ထားရသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကလေးမီးဖွား ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၉) ရက်နေ့၊ ည (၀၈:၄၅) နာရီအချိန် မိုင်တိုင် (၅/၀) အနီးတွင် တောင်ငူ-ရန်ကုန်ပြေးဆွဲသည့်၊ ရွှေမန်းသူ Express ယာဥ်အမှတ် 2D/—ခုံနံပါတ်(၁၁)တွင် လိုက်ပါလာသည့် အမျိုးသမီးသည် (၇) လအရွယ် ကိုယ်ဝန် မွေးဖွားရန် ဗိုက်နာလာသဖြင့် ကူညီပေးရန် အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့…
ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ အမှိုက်လှဲတွန်း လူငယ်လေးကို ဝိုင်းရှယ်ပေးပြီး ဂုဏ်ပြုပေးကြပါ
ဒီလို ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ အမှိုက်လှဲတွန်း လူငယ်လေးကို ဝိုင်းရှယ်ပေးပြီး ဂုဏ်ပြုပေးကြပါ။ အံ့သြလွန်းလို့ပါ။ 7-2-2020 မနက် (11:00) နာရီလောက် ကျောက်မြောင်း သီတာလမ်း အိမ်ရှေ့ကားရပ်ပြီး ကားထဲကဖိုင်ယူပြီး နောက်ဖုံးပေါ် ခဏတင်ပြီး ကားနှင့်ပက်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများ မိတ္တူကူးပြီး ပြန်အလာ ကားရဲ့နောက်ဖုံးပေါ် တင်ထားခဲ့သော ဖိုင်ကိုပြန်မသိမ်း မေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဖိုင်ထဲမှာ ကားအခွန်ဆောင်ရန်ငွေ ခုနှစ်သိန်း ကျော် နှင့် မှတ်ပုံတင် သန်းခေါင်စာရင်း…
မန္တလေး ကညန၏ ထူးခြားမှု တစ်ခု (ကညန ဝန်ထမ်းများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်)
မန္တလေး ကညန မြောက်ပိုင်းရုံးမှာ (27-1-2020) နေ့က ဆိုင်ကယ် လိုင်စင် သက်တမ်း တိုးခြင်းကို ကိုယ်တိုင်သွားလုပ်ပါသည်။ အရင်နေ့များက စည်ပင် ဘီးခွန် ဆောင်တာ တစ်ရက်၊ အာမခံ ရုံးမှာ တစ်ရက် ဆောင်ထားသော ချလံ/ ပြေစာ မူရင်း ၊ဒစ္စဝိုင်း ၊အုံနာဘုတ်များယူ၍ သွားပါသည်။ ဌာနစိပ် ကောင်တာ က ၉:၃၀ မှ ဖွင့်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း…
ဈေးရောင်းနေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို အဖိုးတွေ အဖွားတွေ ဆီကနေ ဈေး၀ယ်ရင် ဈေးမဆစ်ကြပါနဲ့
ဈေးရောင်းနေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို အဖိုးတွေ အဖွားတွေ ဆီကနေ ဈေး၀ယ်ရင် ဈေးမဆစ်ကြပါနဲ့ ရွှေဖြိုးကိုကျောင်းပို့ပြီး မေမေကစျေးဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ စံပြစျေးထဲဝင်ပို့ပေးတာ သပြေပန်းဝယ်နေကြအဖိုးဆီ အမေသပြေပန်းရွေးနေတဲ့ ၅ မိနစ်အတွင်းလေးမှာ လာဝယ်သမျှလူတွေဟာ အဘ သပြေတစ်စည်း ဘယ်လောက်လဲ ၃ရာသမီး ၂စည်း ၅ရာ မရဘူးလား မရပါဘူး သမီးရယ် အဘက တစ်ရာလေးဘဲမြတ်တာ။ ၆ယောက်မှာ ၅ယောက်က တစ်ရာလေးကို မရမကဆစ်တာ အဲ့ထဲမှာ တစ်ယောက်ကဆို…
အတန်းမှူး ဆရာမမှ ကျောင်းသားအား ပါးရိုက်ခြင်း
အထက (၁) အင်းစိန်ရဲ့ Grate 6(F) အတန်းမှူးမှ ကျွန်မသား လင်းရောင်ရှိန်ကို ပါးရိုက်ခြင်း 7.2.2020 (သောကြာနေ့) ညနေ ၅ နာရီ ကျောင်းဆင်းပြီး အိမ်သို့ ရောက်ရောက်ချင်း ကလေးက အိမ်က သိမှာစိုးလို့ တခါမှ မလိမ်းဖူးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ မိတ်ကပ်တွေယူလိမ်းလို့ ကျွန်မက မသင်္ကာလို့ မေးလိုက်မှ ကလေးက အကုန်ပြောပြတယ် ဒီနေ့ကျောင်းမှာ မုန့်စားကျောင်းဆင်းချိန် သူငယ်ချင်းနဲ့…
အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ အောင်ကျော်မင်း ဟုဆိုကာ ငွေကြေး အမြောက်အများ လိမ်လည်သွားသူ တစ်ဦး
ဤမည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည် အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ အောင်ကျော်မင်း ဟုဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက်MLN တွင်အင်္ဂလိပ်စာလာရောက်ပြသပြီး အသင်းဝင်များထံမှငွေကြေးအမြောက်အများလိမ်လည်သွား၍ အမှုဖွင့်ရန် လိုက်လံစုံစမ်းမှ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးရှိမည်သည့် တက္ကသိုလ် က မှ ပါမောက္ခတဦး မဟုတ် ဘဲ ဌာန အမည်ကိုလည်းအလွဲသုံးစားပြုလျက် လက်မှတ်ထိုးခြင်း အမျိုးမျိုး ကိုပြုလုပ်ပြီး—- မြိတ်မြို့ဖက် တွင် ဥက္ကာကျော်အမည်ဖြင့် လိမ်လည်မှုများကျူးလွန်နေကြောင်း သတင်းရရှိထားသော်လည်း နေရပ်လိပ်စာ အတိအကျမသိရသေးသဖြင့်အမှုကိုရှေ့သို့ဆောင်ရွက်ရန်စောင့်ဆိုင်း နေရကြောင်းသိရှိရပါသည်။လိပ်စာသိသူများဖော်ထုတ် ပေးကြပါ။ Robert…